मारवाडी बैंक सिद्धार्थको अधिकांश वित्तीय परिसुचक खस्कँदो क्रममा, कर्जा जोखिम बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी र जगेडा कोषमा ठूलो गिरावट - नेपालबहस
मारवाडी बैंक सिद्धार्थको अधिकांश वित्तीय परिसुचक खस्कँदो क्रममा, कर्जा जोखिम बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी र जगेडा कोषमा ठूलो गिरावट
१३ माघ, काठमाडौं । मारवाडी बैंकको रुपमा परिचित सिद्धार्थ बैंकका पछिल्ला वित्तीय परिसुचकहरु खस्कँदो क्रममा लागेको देखिदैछ । केडिया ग्रुपको वर्चश्व रहेको यो बैंकमा सर्वसाधारण उद्यमी तथा व्यापारीहरुको पहुँच कम तर ठूला व्यवसायिक घरानाहरुको हालीमुहाली रहदै आएको छ ।
मारवाडीहरुको वर्चश्व रहेकाले कर्जा लगानी पनि कर्पोरेट क्षेत्र मै बढी भई यसपटक बैंकको प्रोभिजन रकममा बृद्धि भएको छ । बैंकका अधिकांश परिसुचकहरु खस्कँदा अन्य बैंकहरुको तुलनामा शेयरधनीहरुलाई आर्कषक प्रतिफल बाड्न बैंकलाई सकस पर्ने देखिएको छ ।
सबै बैंकहरुलाई बिग मर्जको हावाले छोएपनि पछिल्लो समय बिजनेश यूनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकलाइ गाभेपछि मर्जको चर्चा हुन नै छाडेको छ । बैंकमा हाल केडिया समुहका मनोजकुमार केडिया अध्यक्ष रहेका छन् भने संचालक सदस्यहरुमा नरेन्द्रकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रकुमार साह र राजेशकुमार केडियाको संस्थापक मारवाडी समुह क्रियाशिल छ भने बिजनेश यूनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकका संस्थापक मध्येका दिनेशशंकर पालिखे मात्र अन्य समुहबाट संचालक रहेका छन् । त्यस्तै हसना शर्मा स्वतन्त्र संचालक रहेकी छन् ।
सिद्धार्थ बैंक सञ्चालक समिति
यसैगरि बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा शम्भुनाथ गौतम सीईओको रुपमा कार्यरत छन् । त्यस्तै सुन्दरप्रसाद कँडेल, रामेश्वरप्रसाद बस्याल र शेरबहादुर बुढाथोकी लगायतको टीम उच्च तहमा कार्यरत रहेको छ । उच्च पदमा रहेका सबै कर्मचारीहरुले बैंकबाट आर्कषक तलब भत्ता तथा सेवा सुविधाहरु उपयोग गरिरहेका छन् । तर सोही अनुपातमा बैंकले प्रगति भने गर्न सकेको छैन् ।
दोस्रो त्रैमासमा बैंकको खुद मुनाफादेखि प्रतिशेयर आम्दानीमा नराम्रो गिरावट आएको छ । यस्तै स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा माथि पुगेको छ । कर्जा जोखिम बढेको, जगेडा कोष र संचित मुनाफा घटेको तथा खराब कर्जामा उल्लेख सुधार हुन नसकेको बैंक आफैले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणले देखाएको छ । सिद्धार्थ बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा उत्साहजनक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सकेन । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमास र गत आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासलाई दाँजेर हेर्दा बैंकको खुद मुनाफामा ४ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब २ करोड खुद मुनाफा गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा बैंकले १ अर्ब ६ करोड खुद मुनाफा गरेको थियो ।
सिद्धार्थ बैंकको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को दोश्रो त्रैमास र आर्थिक वर्ष ०७५/७६६ को दोश्रो त्रैमासलाई दाँजेर हेर्दा :
नोट : प्रतिशेयर आम्दानी र किताबी मूल्य गणना गर्दा सामान्य सुत्रबाट गरिएको हो । माघ १२ गतेको बजार मूल्यको आधारमा मूल्य आम्दानी अनुपात निकालिएको हो ।
प्रतिशेयर आम्दानी घट्यो
कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । चुक्ता पुँजीमा १० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको र खुद मुनाफामा ४ प्रतिशतको गिरावट आएको कारणले गर्दा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी १३ प्रतिशतले कम हुँदै २० रुपैयाँ ९८ पैसा मात्र छ ।
प्रमुख आम्दानीको श्रोतमा वृद्धि :
खुद मुनाफामा गिरावट आएपनि कम्पनीको प्रमुख आम्दानीको श्रोतमा रहेको खुद व्याज आम्दानी भने २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले दोश्रो त्रैमाससम्म २ अर्ब ७७ करोड खुद व्याज आम्दानी गरेको छ ।
यस कारण पर्यो संचालन मुनाफा र खुद मुनाफामा असर :
गतवर्ष दोश्रो त्रैमाससम्म बैंकले ३३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कर्जा जोखिम व्यवस्थापन शिर्षकमा राखेकोमा यो वर्ष भने बैंकले सो शिर्षक (प्राेभिजन) मा ५२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राख्नु परेको देखिन्छ । बैंककाे संचालन खर्च राम्रै वृद्धि हुँदा बैंकको संचालन मुनाफादेखि खुद मुनाफासम्म असर परेको देखिन्छ ।
जगेडा कोष र संचित मुनाफा दुवै घट्यो :
कम्पनीको जगेडा कोष र संचित मुनाफा दुवै घटेको छ । बैंकको संचित मुनाफा ३९ प्रतिशतले घटेर १ अर्ब १० करोड पुगेको छ भने जगेडा कोष ९ प्रतिशतले घटेर ३ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यसरी संचित मुनाफा र जगेडामा रकम घट्दा बैंकको किताबी मूल्य पनि घट्दै १५० रुपैया ७२ पैसा पुगेको छ । शेयर प्रिमियम शिर्षकमा रकम नै छैन ।
स्प्रेड दर घटाउने चुनौती :
नेपाल रास्ट्र बैंकले व्याजदर अन्तर अर्थात स्प्रेडदरमा आउने असार मसान्तसम्म ४ दशमलव ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भने पनि बैंकको स्प्रेडदर वृद्धि भएर ५ प्रतिशत भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । प्रकशित स्प्रेडदर ५ दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ ।
निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाह राम्रै :
निक्षेप संकलन १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १ खर्ब २६ अर्ब पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह १३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ ।
मूल्य आम्दानी अनुपात १४ गुणा :
कम्पनीको माघ १२ गतेको बजार मूल्य ३०८ लाई आधार मान्दा मूल्य आम्दानी अनुपात १४ दशमलव ६८ गुणा रहेको छ । माघ १२ गतेसम्म दोश्रो त्रैमासको वित्तीय प्रतिवेदन निकालेको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार मान्दा दोश्रो बजारमा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात अलिकता धेरै भएको अनुभूति हुन्छ ।
खराब कर्जा सामान्य कम हुँदै १ दशमलव ५५ प्रतिशत पुगेकोमा कम्पनीको सीसीडी अनुपात भने ७८ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । बैंक व्यवस्थापन आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाहमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । बैंकले आधार व्याजदर भने कम गराउन सफल भएको छ । आधार व्याजदर थोरै घटेर १० दशमलव ०४ प्रतिशत पुगेको छ ।
खर्चमा वृद्धि र जोखिम वापत धरै रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्दा बैंकले प्रमुख आम्दानीको श्रोतमा रहेको खुद व्याज आम्दानीमा वृद्धि भएपनि बैंकको खुद मुनाफा घट्न पुग्यो । प्रमुख आम्दानीको श्रोतमा रहेको खुद व्याज आम्दानी वृद्धि गर्नु सकारात्मक पक्ष रहेको छ । निक्षेप र कर्जामा पनि बैंकले राम्रै प्रगति गरेको देखिन्छ । स्प्रेड दरलाई घटाउने चुनौती चाँही बैंकलाई थपिएको छ ।
अघिल्लो लेखसुन तोलाको ७६ हजार !
अर्को लेखएनसेल टावरमा आगजनी, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरमा क्षति
सबल र अब्बल बन्दै ज्योति विकास बैंक
कान्छो वाणिज्य बैंक सेञ्चुरीकाे दिन प्रतिदिन प्रगति, खुद मुनाफामा २५ प्रतिशतले बृद्धि
पर्यटन बोर्डको सीईओमा डा रेग्मी नियुक्त
राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालय र बैंकरको दवाव
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखियो सुधार
के तपाईसँग गणपति माईक्रो फाइनान्सकाे शेयर छ ? यस्तो आयो वित्तीय प्रतिवेदन
एनआईसी एशिया बैंकले ६ महिना मै कमायाे २ अर्ब ९० कराेड, अधिकांश परिसुचक सकारात्मक